डिआइजी आफै स्कुल छिरेपछी… – Radio Madi
सागर थापा,१४ मंसिर २०७५
पाल्पा तानसेन प्रदेश ५ का प्रहरी प्रमुख डिआइजी पिताम्वर अधिकारी तानसेन स्थित जनता माविमा प्रवेश गरे । बर्दीधारी प्रहरी प्रमुख विद्यालयमा प्रवेश गर्न साथ विद्यार्थीहरु एक आपसमा प्रहरी विद्यालयमा आउनुको कारण खोज्न थाले । डिआइजी अधिकारी जब कक्षा कोठामा प्रवेश गरे तब विद्यार्थीहरु एकाग्रह भएर उनी तर्फ हेर्न थाले । डिआइजीले कक्षा कोठामा आउनुको कारण विद्यार्थीहरुलाई के बताएका थिए, विद्यार्थीहरुले प्रश्न गर्न थाले ।
‘के तपाई हामीले सोधेको प्रश्नको अप्ठ्यारो नमानी जवाफ दिन सक्नु हुन्छ ?’एक विद्यार्थीले भनिन् । प्रहरी प्रमुख अधिकारी र विद्यार्थीहरु बीच घण्टौं भलाकुसारी चल्यो । दिनहुँ बन्द कोठामा रहेर अध्ययन गर्ने उनीहरु निर्धक्कसँग आफ्ना कुराहरु राख्न पाउदाँ उत्साहित देखिन्थे । बर्दीधारी प्रहरी प्रमुख अधिकारीसँग विद्यार्थीहरुको कुनै हिच्किचााहट फिटिक्कै थिएन, न त प्रहरी प्रमुखले नै कुरा लुकाए । विद्यार्थीहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ डिआइजीले रमाइलो पारामा दिईरहेका थिए । विद्यार्थीहरुले पालैपालो प्रश्न राखिरहेका थिए ।
समाजमा पुरुष सरह निर्धक्क भएर सुरक्षित रुपमा हिडडुल गर्न कहिले पाईन्छ सर ? हामीले पनि पुरुष सरह मान सम्मान कहिले पाईन्छ सर ? विद्यार्थी रेनुका खाँम्चाले प्रश्न गरिन् । समाजमा स-साना बालिकादेखि वृद्ध हजुर आमासम्म सुरक्षित नभएपछि रेनुकाले डिआजी अधिकारीसँग यस्तो प्रश्न गरेकी हुन् । सोही विद्यालयमा अध्यनरत अर्की बालिका सविना श्रेष्ठले लामो समय सम्म निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता नलाग्नुको कारण बारे प्रदेश प्रहरी प्रमुख अधिकारीसँग जिज्ञासा राखिन् । अर्को विद्यार्थी रोशन नेपालले पनि दरवार हत्याकाण्डको बारेमा जिज्ञासा राखे । बुधबार प्रहरी – विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम अन्तर्ग तानसेन आएका डिआइजीलाई विद्यालयमै विद्यार्थीहरुले प्रश्न गरेका हुन् । जवाफमा डिआइजी अधिकारीले कानुनी कुराबाट भन्दा सामाजिक विभेदका कारण पुरुष सरह महिलाहरुले स्वतन्त्र रुपमा कुनै पनि काम गर्न नपाएको बताए
घर तथा परिवारबाटै लैङ्गिक हिंसा शुरु भएकाले परिवारबाटै सुधारको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, जसको नेतृत्व टिनेजर युवा युवतीबाटै गर्नुपर्ने, पढाई, घर व्यबहार, आम्दानी खर्च जस्ता काममा छोरा छोरीबीच बराबर अधिकारको अभ्यास गर्नुपर्ने डिआइजी अधिकारीले बताए । समाजमा विविध तरीकाबाट अपराधका घटनाहरु हुने भएकाले सो घटनामा विद्यालयमा अध्यनरत बालवालिकाहरु नपरुन भनि नेपाल प्रहरीले विद्यालय केन्द्रित अन्तक्रिया शुरु गरेको डिआइजी अधिकारीले जानकारी गराए । विद्यालयमा पढ्ने बालवालिका नै भोलीको नेपाल निर्माण गर्ने भएकाले उनीहरु आपराधिक गतिविधीमा नफसुन भनि समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम लागु गरिएको उनले बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले समाजबाट अपराध न्युनिकरणका लागि विद्यालय सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख विश्वमणी पोखरेलले यौन हिंसा, साईवर अपराध, लागु औषध दुरव्यसनी जस्ता अपराधका विषयमा जानकारी गराए । कार्यक्रममा प्रहरी उपरिक्षक पोखरेलले घरेलु तथा यौन हिंसाबाट बच्ने तरिका, साईवर अपराधका प्रक्रियाहरु, लागु औषधमा साथी साथीको लहलहैमा फस्ने अवस्थामा, प्रहरीको सहयोग तथा कानुनी उपचारको विषयमा विद्यार्थीहरुलाई जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा जनता माविका प्रधानाध्यापक मेघराज पौडेल, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण भुसाल, पाल्पा क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र विक, प्रहरी नायव उपरिक्षक विनोद घिमिरे, जिल्ला ट्राफिक प्रमुख डम्वर गिरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा विद्यालयका शिक्षकहरुले विषयबस्तु एकदमै राम्रो भएकाले कक्षा ८ देखी माथिका विद्यार्थीहरुलाई दिनभरी नै जनचेतना दिनुपर्ने शिक्षक कपिल कुवँरले बताए ।
शिक्षक कुश्माखर पोखरेलले मेरो फोन नम्वर ह्याक गरी अन्य व्यक्तिले फोन गरी आफुलाई तनाव दिएको घटना स्मरण गराउदै यस्तो घटना आएमा प्रहरीलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे । कार्यक्रममा पाल्पा प्रहरी प्रमुख पोखरेलले आगामी दिन विद्यालय स्तरीय जनचेतना कार्यक्रमलाई प्याकेजको रुपमा सञ्चालन गर्ने बताए ।